UMGANGATHO OPHAMBILI WEZINJA (IINDIDI ZOMGANGATHO ODUMILEYO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umgangatho oPhambili weZinja (Iindidi zoMgangatho oDumileyo)
Umgangatho oPhambili weZinja (Iindidi zoMgangatho oDumileyo)
Wamkelekile kwiphepha lethu ekufumaneni eyona migangatho ilungileyo yezinja ekhaya. Ngokungafaniyo nesiphi na isilwanyana, izinja zinonxibelelwano olomeleleyo ngokubhekisele ebantwini ngandlela zonke. Izinja zingaphezulu nje kokudibana nabantu, bayinxalenye yosapho. Kubalulekile ukuba ucinge ngononophelo ngemeko yekhaya lakho ukuze uqiniseke ukuba iyilungele inja yakho. Apha ngezantsi siza kujonga owona mgangatho mhle wezinja kwaye zeziphi iintlobo ekulula ukuzigcina kwaye zihlala zijongeka zintle.
Phakathi kweendidi ezininzi zophahla, iintlobo ezithile zilunge ngakumbi kwabo banezilwanyana zasekhaya ukuze bakwazi ukuhamba noxinzelelo simahla. Xa ujonga ukhetho lomgangatho kubalulekile ukuba ucinge ngawe kunye nenja yakho indlela yokuphila ukuze ukhethe uhlobo lomgangatho olunge ngakumbi. Ezi ntlobo zomgangatho nganye inezinto ezilungileyo nezingalunganga. Ngokubanzi, zininzi iintlobo zomgangatho ongasetyenziswa. Umzekelo, eyona migangatho ilungileyo yezinja ngumthi onzima, uqalo, ikhokho, ilaminethi kunye nevinyl.
Umgangatho oPhambili woMthi weenja
Iindidi zoMgangatho weZinja
Umgangatho oLungileyo weLaminate yeZinja
Umshini ogqwesileyo weenja zeenja kumgangatho okhuni
Eyona ndlela yokuCoca iiNja zeNja kumgangatho weenkuni
Umshayelo ogqwesileyo weenja zeenja kumgangatho okhuni
Umgangatho wokhuni oluqinileyo - Ukhetho lomgangatho wokhuni oluqinileyo luza luncedo njengomthi wokhuni wezinja kwiintlobo ezahlukeneyo. I-Oak, iCherry, iMahogany kunye ne-Bamboo zimbalwa ekufuneka zisetyenzisiwe njengomgangatho wokhuni oluqinileyo kwizindlu ezilungele izilwanyana zasekhaya. Umgangatho wokumelana nokukrwela, kunye neendidi zemibala kunye nokugqitywa kunye nokugcinwa ngokulula zizinto ezimbalwa eziluncedo kwezi ntlobo.
Owona mqobo uphambili kumgangatho wokhuni oluqinileyo ngumngcipheko kumonakalo wamanzi kunye nokuchitheka. Izinja zinokukufumanisa kunzima ukugcina ukubambelela kumgangatho wokhuni oluqinileyo, onokubangela ukutyibilika. Oku, ekubeni zizithintelo eziphambili kumgangatho okhuni womthi kunika ezinye izibonelelo kubanini bezinja.
Ubunjineli bomgangatho okhuni -Iyona ntombazana ilungileyo yomgangatho wokhuni olomeleleyo ngumgangatho wokhuni olomeleleyo olunikezela ukugqiba okunzima kakhulu. Umgangatho wokhuni olomeleleyo wobunjineli ubonelela ngobugcisa obufanayo bomgangatho okhuni wendalo kunye nezinye izibonelelo. Umzekelo, umaleko ophezulu wenzelwe umaleko okhuni onomtsalane ngelixa iziseko ezisezantsi zibonelela ngozinzo olukhulu ngokugcina iintlobo ezithile zezinja ekhaya.
iinwele zomama womtshakazi ngaphezulu kwama-50
Ngomgangatho okhethiweyo wobunjineli obukhuni obunokumelana nokuthintela amanzi kunokhetho lwendalo oluqinileyo. Ukuba ngumgangatho oqinileyo, amathuba okunxiba umgangatho ancitshisiwe. Ezi ntlobo zeempawu zibaluleke kakhulu xa ugcina izilwanyana ekhaya.
Uqalo - I-bamboo yenye yeentlobo eziqinileyo zomthi, emi phezulu kwemithi emininzi yendalo. Umgangatho we-bamboo unqabile ngakumbi kunentlobo ezininzi kwaye kulula kakhulu ukuwugcina ngakumbi apho kufanelekileyo ukuba nesilwanyana sasekhaya.
Nangona kunjalo, uqalo luyinto entle ukumelana namanzi xa kuthelekiswa nomthi onzima, kufuneka kuthathwe imilinganiselo yokhuseleko ukunqanda ukubekwa kwamanzi emgangathweni ixesha elide kunokuba kufanelekile elinokuthi liguqule imigangatho yeenkuni. Tyelela eli phepha ukuze ufunde okungakumbi malunga Ukulunga kunye neengozi zomgangatho woqalo .
Iitayile zelitye -Umgangatho wethayile ojikelezayo unokuba lukhetho olukhulu kwabo banezinja njengoko kukhuselekile kakhulu kunqabile kwaye kulula ukucoceka nokugcina. Iingxaki zethayile yelitye zinokutyibilika kakhulu kunye nobuso obunzima kwiinyawo zakhe. Ungayichazanga into yokuba i-tile yamatye inokuba yindawo ebanda kakhulu ukuhamba kuyo kwabo bathanda ukuhamba ngeenyawo bejikeleza indlu.
Laminate -Ngokunye ukujongeka komgangatho okhuni womthi ngaphandle kwemicimbi emininzi yokugcina, ukutyibilika komgangatho wokulaminetha lukhetho olufanelekileyo kwiintsapho ezinezilwanyana zasekhaya. Umgangatho olaminethiweyo kulula ukuwugcina, ukumelana namanzi, kubiza ixabiso elingaphantsi komthi onzima kwaye awukrwabi lula. Nangona kunjalo, ngazo zonke ezo zinto zilungileyo kukho iingozi ezimbalwa, ubude bexesha kunye nokutyibilika kolu hlobo lomgangatho. I-Laminate iya kuhlala ixesha elide, ingekude kufutshane nomgangatho okhuni ogcinwe kakuhle. Ukongeza, izilwanyana zasekhaya zinokutyibilika ngokulula ngaphandle kokuba ukhetha i-laminate flooring enomhlaba obunjiweyo okanye obhalwe embossing okanye wongeze indawo eyongezelelweyo yombhoxo ngaphezulu.
Ukwabelana ngombono ofanayo womthi okhuni, i-laminate flooring lolunye ukhetho olukhulu kwindlu enobubele yesilwanyana. Kakhulu uhlobo lomgangatho olaminethiweyo olithengayo unokuxhomekeka kuhlobo lwenja yakho. Umzekelo, iintlobo ezincinci zeenja azinakunyanzelisa ukuba zibekwe kumgangatho omde we-laminate apho iintlobo ezinkulu zeenja ezinobunzima zifuna ukujikwa komgangatho ozinzileyo nozinzileyo.
Iindidi zomgangatho we-laminate - Umgangatho weLaminate wenziwe ngeendlela ezahlukeneyo ezizezi HPL kunye neDPL.
I-HPL (i-High Pressure Laminate) imigangatho ifaneleke ngakumbi kwizindlu ezinobuncwane bezilwanyana ngenxa yokuzinza kwayo kune-DPL (Direct Pressure Laminate).
izipho zomyeni kwisikhumbuzo
Kukho iintlobo zeentlobo zomgangatho we-laminate ezenzelwe ngokukodwa izinja. Ukulinganiswa kwe-AC (Abrasion Class) ye-AC3, AC4 kunye ne-AC5 zezona zilungele abanini bezinja abafuna ukuphatha ukugcwala endlwini.
I-Alloc Laminate, i-Quickstep Laminate kunye neTarkett Laminate zibonelela ngomgangatho olungileyo wokuthambisa izinja kwaye zizonke zikhetha umgangatho wezilwanyana zasekhaya.
Izinwele zenja zinokuba yingxaki enkulu kwabo banezinja. Ukucocwa kweenwele kumgangatho onzima kunokuba ngumsebenzi obonakalayo onzima kubanini bezindlu. Kule mihla, kukho iintlobo ezininzi zezinto zokucoca umoya ezenzelwe ingxaki uninzi lwabanini bezilwanyana abajongana nazo, ngakumbi. Kodwa ukukhetha i-vacuum efanelekileyo kunokuba ngumnye umsebenzi onzima, ngokunjalo.
I-Dyson DC41 yezilwanyana eziGqibeleleyo zokuCoca iZinto eziCocekileyo zezona zilungileyo zokucoca iinwele zasekhaya kwimarike. Izikhuselo zeDyson zenzelwe ikakhulu abanini bezilwanyana, njengesisombululo sokujongana nengxaki yokuchithwa kweenwele zezilwanyana kumgangatho onzima. I-vacuum iyilelwe ngamandla anamandla okutsala anokufunxa olunye uthuli kunye namasuntswana, nawo. UDyson ungomnye wohlobo oluthembekileyo, uza nezixhobo ezongezelelweyo kwaye upakishwe newaranti yeminyaka emi-5.
IDyson DC-41 - Imvelaphi
Ukuba ungumnini wenja, ngokuqinisekileyo inja yakho inokushiya nomnqweno wokucoca iinwele zayo ezichithwe kumgangatho wakho okhuni. Oku, ngokuqinisekileyo kufuna ulwazi ekucoceni imigangatho eqinileyo yomthi nokuba kungokutsala okanye ukukhupha okanye ngokutshayela. Olona khetho lulungileyo kunye nolusebenzayo kukususa iinwele zenja ezisasazeke kumgangatho wakho wokhuni.
Kuyacetyiswa ukuba uthenge ubunzima obukhanyayo kunye ne-vacuum elula yokucoca iinwele zenja yonke imihla. Kukho izithuba zerobhothi ezikhoyo kwimarike ezinokuxhasa ekucoceni iinwele zakho zenja kumgangatho wokhuni.
Kodwa ukuba uthe wadibana neengxaki ezinje ngokuxhwilwa kweenja zenja, umaleko wokutywina iinkuni uya kwenza ngokwaneleyo ukufeza ukugqibelela nokugqibezela kumgangatho wakho weplanga.
Umtshayelo weFurmover usebenza ngokugqibeleleyo ekuchongeni iinwele zasekhaya kunye neenwele zabantu, ngokufanayo. Ngokungafaniyo nemitshayelo yemveli, iFurmover iqokelela bonke uboya neenwele amaxesha amaninzi ngokutshayela kube kanye. Ilula ukuyisebenzisa, kwaye iyasebenza kwaye iyasebenza ngexesha elinye. Yintoni eyahlukileyo malunga, iFurmover yintloko yomtshayelo eyenziwe ngerabha yendalo. Iziphumo ezinokuthi zizinze kwaye zisebenze kakuhle.
Yintoni ekhethekileyo ngomtshayelo yintlawulo emileyo eyenzileyo. Ngenxa yoko iinwele ziya kunamathela kumtshayelo, ukwenza ukucoca kube lula ngakumbi. Elinye iqhekeza lothuli liza kuhlala ecaleni komtshayelo phantsi ngenxa yendlela ekhethekileyo.
I-Furmover yeZinwele zeRubber yeBhola - Imvelaphi
Iirubber bristles zentloko yomtshayelo zenza uhlobo lodonga lwesithintelo olungavumeli ukuba uthuli luthubeleze kwimitshayelo yomtshayelo. I-Furmover ngumtshayelo owenziwe kakuhle ngokukodwa ojolise kubanini bezinja kunye nokusetyenziswa kweesalon ngokunjalo.
Ukuba ulifumene eli nqaku liluncedo unokuyonwabela le kwi iisofa ezingcono zezinja .
Iindidi zeZinto zoMgangatho - Ubunjineli boMgangatho oLukhuni eKhitshini - Umgangatho we-Eco Friendly
Sisiphi isipho endifanele ukusinika umamazala wam
incwadi yamaqhina yoluhlu lomtshato
nguwuphi umahluko phakathi kuka mrs no ms
iingoma ezilishumi zothando eziphezulu zawo onke amaxesha